ကောင်းကင်ကို: တိတ္ထိရဲ့တိတ္ထိ (ဝတ္ထုတို)
Posted by Kaung Kin Ko at 2:19 PM
Kolat(Anyar Thar) said...
i like it this novel...
တိတ္ထိလို့ စာအ်ိပ်မှာတပ်ပြီး ဒီနေ့ ပဲ စာတိုက်မှာထည့်လိုက်တယ်
"Voltaire states that God is the noblest creation of man".
(The Buddha and His Teaching: Vend. Nadaya)
ဒီဝတ္တုလေးဖတ်ရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်က စစ်ကိုင်းဦးဖိုးသင်း ၀တ္တုတွေဖတ်ဘူးတာထဲက တစ်ခုကို သတိရမိတယ်။
ဥပုဓ်နေ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ရွာလုံးကျွတ်သွားကြတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီဇတ်ကောင်က (သူ့နံမည် “တိတ္ထိ” လို့ထားပါတော့ ၊မေ့သွားလို့ပါ )လူရှင်းပြီ၊ ငါးများများရအောင် ဆိုပြီး ချောင်းမှာငါးသွားဖမ်းတယ်။ အဲဒီအချိန် ချောင်းထဲမှာ မိန်းခလေး အ၀တ်မပါပဲယက်ကန်ယက်ကန်မျောလာတော့ သွားဆယ်တယ်။ မိန်းခလေးမိဘတွေနဲ့ တဘက်ရွာသားတွေက သူ့ကို အသက်ကယ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မိန်းခလေးအဖေက ၀မ်းသာလွန်းလို့ ခဏခဏပြောတယ်တဲ့ “ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ”။
အဲဒါကို ဇတ်ကောင် တိတ္ထိ ကကြားတော့
“ သူတို့ ဘုရားသခင်က လူရွှတ်ပဲ ကောင်မလေးကို ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ငါရှိတဲ့နေရာများ လွှတ်ပေးရတယ်လို့ ဟင်းးးး ” တဲ့။
ဖတ်ဘူးတာကိုပြန်ပြီး မျှဝေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိပါတယ်။
ဦးဦးကောင်းကင်ကိုရေ...အဲ့စာအုပ် ဒေါင်းတာ လစ်မစ် ပြည့်သွားလို့တဲ့ဒေါင်းလို့လဲ မရဘူး...အဟင့်
အဲဒါ မက်မက်ကို crazydreamlover မေးလ်ထဲ ပို့ပေးနော်....
ရှားရှားပါးပါး လက်ရာပါ။ :D
ကာလာမ သုတ်ကိုတော့ သဘောကျတာခြင်းတူနေပြီ။
အိမ်မှာကလည်း နတ်တွေ ကိုးကွယ်ကြတယ် ။ ငယ်ငယ်တုန်းကလဲ တစ်နေ့ လေးငါးကြိမ် ဘုရားကို သတိရအောင် ဘာသာပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးသေးတယ်။
ကျနော်က ကျနော့ရဲ့ ပေကပ်ကပ် ------ ကျနော့အတွေးထက်တောင် မိစ္ဆာဆန်နေသေးတယ် ။ အဲဒီအပိုဒ်လေးကို အရမ်းသဘောကျတယ် ကျနော်လဲ အဲဒီစာကို ဖတ်ပြီး အခုထိတွေးတုန်းပဲ။
အရင်နားလည်ထားတာကတော့ ဖယောင်းတိုင်လေး မီးကူသလိုမျိုး ဒီဖယောင်းတိုင်က နောက်တစ်တိုင်ကို မီးကူးသလိုပဲ။
နတ်ပြည်တော့ မသွားချင်ဘူး တစ်ဖက်လေးငါးရာ ဆိုတာကို လည်းကြောက်သလို အင်တာနက်မရှိ စာအုပ်ဖတ်စရာ မရှိဆိုတော့ ပျင်းစရာကြီးဖြစ်မှာဗျ။ ကိလေသာ အာရုံကို တက်မက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့။
ရသမြောက်တဲ့ ဇတ်လမ်းကိုတော့ ဖတ်ရင်းလွမ်းတယ်။
၀တ္ထုတို လှတယ်။ သတိရမိတယ်။ "Free Thinker ဆိုတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်ရတယ်"ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ ချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ Free Thinkerတစ်ယောက် တွေ့ဖူးတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတယ်။
ကျနော် ခင်ဗျားရဲ့ ဝတ္ထုတိုကို ခင်ဗျားတင်တဲ့နေ့မှာပဲ ဖတ်လိုက်တယ် ကျနော်လဲ အရမ်းထပ်တူ ခံစားလိုက်ရပါတယ်.
ခင်ဗျားကို တခုတော့ဝန်ခံစေချင်တယ် ခင်ဗျားဟာ အချစ်ကို တန်ဘိုးထားတာထက် သာယာမှု့ကို ရေစုန်မျောတတ်တဲ့ လူတယောက်ပဲ ကျနော်သာ ခင်ဗျားနေရာမှာဆို ဘာကိုမှ ဂရုမဆိုက်တော့ဘူး ကျနော့်ချစ်သူကိုရအောင်ရှာမှာ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ခင်ဗျားရအောင်ရှာနိုင်ခဲ့တယ် ခင်ဗျား စိတ်က အနားမှာရှိတဲ့ ကောင်မလေးကို အားနာနေတာ သာယာနေတာတွေနဲ့ အချိန်တွေကို ကုစားနေခဲ့တာ သေသွားတဲ့ခင်ဗျား ချစ်သူက သူ့မှာအားနည်းချက်တွေ ရှိနေပေမယ့် ခင်ဗျားကိုအမြဲ မျှော်လင့်တောင်းတနေသူပဲဆိုတာ ခင်ဗျားသိနေတာပဲ ...... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်အများကြီးဆက်မပြောတော့ပါဘူး ယောက်ကျားတယောက်ရဲ့ သစ္စာ သတ္တိနဲ့ အချစ် သယာမှုတွေအပေါ်မှာ မနစ်မျောပါစေ
ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူး ကိုဝေယံ
ဟုတ်ကဲ့။ စနေ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာပဲ ရေးတာပါ။ သုံးလခွဲ လေးလလောက် ကြာပါတယ်ခင်ဗျ။
ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးပါ။း-)
စာအုပ်လေးဖက်၇တာ တော်တော်ခံစား၇ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက် အ၇မ်းနီးစပ်တဲ့တွေး တွေလဲ၇လိုက်တယ် ကျေးဇူးပါ။အကို စာတွေအကုန်လုံးနီးနီးသဘောကျပါတယ်။
Greetings! I was interested to know if setting upablogging site such your own: http://www.
blogger.com/comment.g?blogID=6028901933327882406&postID=3580847175853559955 is difficult to do for unskilled
people? I have been hoping to set up my own blog forawhile
Check out my site - www.empowersvs.co.uk
Rose Rosy said...
ဒီsiteကိုအခုမှတွေ့ဖူးတာပါ စာလေးတွေအမြည်းဖတ်ကြည့်ရင်းသဘောကျလို့...အရမ်းကောင်းတဲ့ အရေးအသားတွေပါ..